Samachar Batika || News from Nepal » ज्योतिषशास्त्र : कुन कुन राशिका जोडीहरुबीच विवाहका लागि शुभ मानिदैन ?
मकर र सिंह – हावी हुनु सिंह राशिको स्वाभाविक गुण भएका कारण मकर राशिका व्यक्तिलाई सम्बन्ध बि’ग्रने ख’तराको संकेत थाहा हुन्छ । यदि सम्बन्ध नबिग्रिएमा पनि यी दुई राशिबीच खुशीले बास पाउँदैन ।
मीन र तुला – तुला राशिका व्यक्ति प्राय आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्छ मीन राशिको आफ्नो जोडीमा निर्भर रहन्छन् । यद्यपी, मीनलाई यसप्रति खासै आपत्ति हुन्न, तर आँफूलाई तुला राशिका लागि आवश्यक रहेको ठान्ने भूल गर्छ र सम्मान नमिलेमा उनका लागि तनावको कारण बन्न सक्छ ।
मिथुन र मकर– मिथुन राशिलाई मकरको जि’द्दीपन र कुनै पनि कामलाई पूरा गरेरै छोड्ने बानी एकदमै मनपर्छ । यी राशिका व्यक्ति यति प्रभावित हुन्छन्, कि मकर राशिले जस्तै जीवनशैली बनाउँने प्रयास गर्छ । यस्तो अवस्थामा मिथुन राशिले आफ्नो अस्तित्व र आत्मविश्वास गुमाउँने गर्छन् ।
कर्कट र कुम्भ – कर्कट राशिलाई झु’ट मनपर्दैन, जहाँ कुम्भ राशिले भने सम्बन्धमा धेरै पारदर्शिता राख्नुपर्छ भन्नेमा विश्वास गर्दैन । त्यसैले, यी राशिबीच तालमेल नमिल्ने हुन्छ र यी बीचको सम्बन्धमा झ’मेला आउँने बताइन्छ ।
कन्या र मेष– कन्या राशिका व्यक्ति प्राय शान्त स्वाभावका हुन्छन् र वि’वादबाट बच्न चाहन्छन्, त्यसैले धेरै जसो झ’गडा, वि’वाद आदिबाट बच्न अर्कोको कुरा मान्ने गर्छन् । तर, यसको फाइदा मेष राशिले उठाउने गर्छ । यस्तो अवस्थामा मेष राशिलाई आफ्नो जोडीबाहेक अरु केही मान्दैनन् ।
वृष र धनु– वृष र धनु राशिबीच प्रेम वा विवाह सम्बन्ध भएमा त’हस–न’हसको स्थिति सिर्जना गर्ने बताइन्छ । बृष राशिका व्यक्तिहरु जे सोच्छन् वा जीवनमा आफूले बनाएको लक्ष्य धनु राशिले परिवर्तन गराउँने अवस्थामा आउँछ । एकातिर धनु राशिकाले वृषका लाई पूरै परिवर्तन गराउँन चाहन्छन्, तर वृष राशिका परिवर्तन हुन चाहँदैनन् । यसरी यी राशिबीच तालमेल नमिल्ने हुन्छ ।
कुम्भ र कन्या– कुम्भ राशिका व्यक्ति थोरै स्वार्थी हुन्छन्, जहाँ कन्या राशिका व्यक्ति त्यागमयी हनुका कारण आवश्यकताभन्दा बढी आफ्नोभन्दा अरुको बारेमा चि’न्ता गर्छन् ।त्यस्तै, कन्या राशिले मनोविज्ञान पनि बुझ्छ, जो कुम्भ राशिको मनोस्थितिलाई बदल्ने प्रयत्न गर्छ ।
तुला र वृष– आर्थिक मामिलामा यी दुवै राशिबीच एउटै प्रकारको राय हुन्छ, तर यी दुवै राशि एक–साथ रहनु असम्भव जस्तै हो । वृष राशि पैसालाई लिएर खासै ब’हस गर्न मान्दैन, यस कारण तुला राशिका व्यक्तिलाई वृषको साथ निभाउँन गा’ह्रो हुन थाल्छ ।
सिंह र मीन– मीन राशिका व्यक्ति आफ्नै दुनियाँमा व्यस्त रहने हुन्छन, जहाँ सिंह राशिका लागि भावना देखाउँनु र महसुश गराउँनेमा विश्वास गर्छ । सिंह राशिका व्यक्ति आफ्नो जोडी आफ्नो काममा पनि ध्यान दिओस्, कामप्रति राय तथा भावना व्यक्त गरोस भन्ने चाहन्छ । तर मीन राशिका व्यक्तिले भा’वुक सिंह राशिकालाई वास्तविक जीवनमा ल्याउँन गा’ह्रो हुन्छ । यसै कारण यी दुई राशिबीच सम्बन्ध बनाउँन गा’ह्रो हुने बताइन्छ ।
ज्योतिष शास्त्रले मानिसको भूत, वर्तमान र भविष्यको विषयमा फलादेश गर्छ । उसको जन्म समयलाई आधार मानेर जन्मकुण्डली बनाइन्छ । जन्मकुण्डली अनुसार उसको फलादेश गरिन्छ ।जन्मकुण्डलीमा कुन ग्रहको स्थिति के छ ? ग्रहको प्रभावस्वरुप उसको जीवनमा के कस्ता उतारचढाव आउँछन् ? यस विषयमा समेत भविष्यवाणि गरिन्छ । यसबाहेक मानिसको सवैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो वैवाहिक जीवनका विषयमा पनि ज्योतिष शास्त्रमा फलादेश गरिन्छ । जुन माथी प्रस्तुत गरीसकेका छौ ।
प्रकाशित मिति १२ फाल्गुन २०७६, सोमबार ०३:११